I-Clearbit: Ukusebenzisa Ubuhlakani Besikhathi Sangempela Ukwenza Okuthandwa Nguwe Futhi Nokwandisa Iwebhusayithi Yakho Ye-B2B | Martech Zone
Abakhangisi bedijithali bagxila kakhulu emandleni abo ekubuyiseleni ithrafikhi kuwebhusayithi yabo. Batshala imali ezikhangisweni ezinkundleni zokuxhumana nakwezinye izindlela, bathuthukise okuqukethwe okuwusizo ukushayela umkhondo ongenayo, futhi bathuthukise iwebhusayithi yabo ukuze ibe phezulu kusesho lwe-Google. Kodwa-ke, abaningi abaqapheli ukuthi, naphezu kwemizamo yabo emihle, basebenzisa kancane kakhulu iwebhusayithi yabo.
Impela, ukwanda kwethrafikhi yesayithi kuyingxenye ebalulekile yesu lokumaketha lilonke, kodwa ngeke kusho lukhulu uma izivakashi zewebhusayithi zingazazisi (isb, ngokugcwalisa ifomu). Eqinisweni, uvame ukuba nje 10 imizuzwana ukuze ubambe ukunaka kwesivakashi ngaphambi kokuthi sishiye iwebhusayithi yakho. Uma uthola inqwaba yezivakashi zesayithi kodwa uphoxekile ngokuthi abambalwa babo abaguqulela umkhondo, yisikhathi sokwenza leyo mizuzwana embalwa yokuqala ibale ngempela - futhi kulapho ukwenza kube ngokwakho kuwukhiye.
Ukuzama ukukhuluma nawo wonke umuntu kusho ukunciphisa amandla omlayezo wakho kuzithameli zakho zangempela. Indlela yokumaketha yomuntu siqu, ngakolunye uhlangothi, idala ulwazi olungcono oluholela ekuguquleni okusheshayo kanye nobudlelwano obuqinile bethemba. Ukwenza kube ngokwakho kwandisa ukuhambisana yomlayezo wakho - futhi ukuhambisana yikho okushayela lwekucocisana.
Manje, kungenzeka ukuthi uyazicabangela, Singayiletha kanjani imilayezo yomuntu siqu ezinkampanini zethu eziqondiwe ezingu-100, 1000, noma ezingu-10,000 ngezikali? Kulula kunalokho ongase ukucabange.
Imikhuba Engcono Kakhulu Yokuguqula I-Web Traffic Eyengeziwe
Ngaphambi kokuthi usebenzise noma yikuphi ukumaketha komuntu siqu, udinga kuqala wenze izinqumo mayelana nokuthi ubani ozokhomba. Ayikho indlela yokuthuthukisa wonke umuntu noma zonke izinhlobo zezithameli. Gxila engxenyeni yakho eyodwa noma ezimbili eziphezulu, ukwaziswa iphrofayela yakho yekhasimende efanelekile kanye nabantu bokuthengisa, nokuthi yini ebahlukanisa noquqaba.
Izibaluli ezijwayelekile ze-firmographic ezisiza ukuhlukanisa lezi zingxenye eziqondiwe zifaka:
Imboni (isb., ukudayisa, imidiya, ubuchwepheshe)
Ubukhulu benkampani (isb, ibhizinisi, i-SMB, ukuqala)
Uhlobo lwebhizinisi (isb, e-commerce, B2B, venture capital)
Indawo (isb, Northeast USA, EMEA, Singapore)
Ungakwazi futhi ukusebenzisa idatha yezibalo (njengesihloko somsebenzi) kanye nedatha yokuziphatha (njengokubukwa kwamakhasi, ukulandwa kokuqukethwe, uhambo lwabasebenzisi, nokusebenzisana komkhiqizo) ukuze uqhubeke nesegimenti yabasebenzisi abahlonziwe ngokulingana nenjongo. Ukuqonda kangcono izivakashi zakho kukuvumela ukuthi uqale ukuklama uhambo lwabo futhi ulungise ukubingelela kwakho, ukuzulazula, kanye neminikelo ngokufanele.
Impela, cishe usuwakhile amakhasi okubikezela akhethekile engxenye ngayinye, kodwa ngokubonisa imilayezo efanelana nawe, izingcingo esenzweni, izithombe zamaqhawe, ubufakazi bomphakathi, ingxoxo, nezinye izici, ungakwazi ukuxhumana neziphakamiso zenani elifanele kulo lonke isayithi lakho.
Futhi ngethuluzi le-reverse-IP intelligence like I-clearbit's Reveal Intelligence Platform, uthola isiqalo esihle kuyo yonke le nqubo.
Ukubuka konke kwesixazululo se-Clearbit
I-Clearbit iyinkundla yobuhlakani yokumaketha ye-B2B eyenza amaqembu ezentengiso nemali engenayo asebenzise idatha ecebile, yesikhathi sangempela kuyo yonke ifaneli yawo yedijithali.
Elinye lamakhono eplathifomu eyinhloko ye-Clearbit Ukuvezwa - isistimu yokubheka i-IP ehlehlayo ukuze ikhombe ngokuzenzakalelayo lapho isivakashi sewebhusayithi sisebenza khona, futhi ifinyelele izici ezibalulekile ezingaphezu kwe-100 mayelana naleyo nkampani kusukela kuplathifomu yezobunhloli yesikhathi sangempela ye-Clearbit. Lokhu kunikeza ngokushesha idatha ecebile ukuze kunikwe amandla ukwenza kube ngokwakho - njengegama lenkampani, usayizi, indawo, imboni, ubuchwepheshe obusetshenzisiwe, nokunye okuningi. Nangaphambi kokuba banikeze amakheli abo e-imeyili, ungakwazi ukwazi ukuthi usebenzelana nobani - noma ngabe bayi-akhawunti eqondiwe noma bawela esigabeni esithile - kanye nokuthi imaphi amakhasi abawapheqululayo. Ngokuhlanganiswa kwe-Slack ne-imeyili, i-Clearbit ingakwazi ngisho nokwazisa amaqembu okuthengisa nempumelelo ngokushesha nje lapho amathuba okuhlosiwe nama-akhawunti abalulekile efika kuwebhusayithi yakho.
Guqula izivakashi eziningi zibe ipayipi: Khomba izivakashi zewebhu ezilingana kakhulu, dala ukuzizwisa komuntu siqu, finyeza amafomu, futhi uthole okuningi kuthrafikhi yakho ebalulekile.
Veza izivakashi zakho zewebhusayithi ezingaziwa: Hlanganisa i-akhawunti, othintana naye, nedatha yezobuhlakani be-IP ukuze uqonde ithrafikhi yakho futhi uhlonze amathuba.
Susa ukungqubuzana futhi ukhuphule isivinini sokuhola. Fushanisa amafomu, wenze kube ngokwakho ukuzizwisa, futhi wazise ithimba lakho labadayisi ngesikhathi sangempela lapho ama-akhawunti afaneleka kakhulu ebonisa inhloso.
Ngokungafani nezinye izixazululo ezinikeza imininingwane yokuxhumana yokuthengisa kuphela, i-Clearbit inikeza izimfanelo ezingu-100+ ezinkampanini ezingaphezu kwe-44M. Futhi, ngokungafani nezixazululo zesuite ezivaliwe, “zonke-in-one”, inkundla yokuqala ye-API ye-Clearbit yenza kube lula ukuhlanganisa idatha ye-Clearbit namasistimu akho akhona futhi ikwenze isebenze kuso sonke isitaki sakho se-MarTech.
I-Clearbit iphinde inikeze inguqulo yamahhala yalawa makhono ngombiko wayo Wamasonto onke Wezivakashi, okhomba izinkampani ezivakashela iwebhusayithi nokuthi yimaphi amakhasi eziwavakashele. Umbiko wamasonto onke owenziwe ngesitayela, osebenzisanayo ulethwa nge-imeyili njalo ngoLwesihlanu futhi ikuvumela ukuthi uhlukanise izivakashi zakho ngenani lokuvakasha, isiteshi sokutholwa, nezibaluli zenkampani ezifana nemboni, usayizi wabasebenzi, imali engenayo, ubuchwepheshe, nokunye okuningi. Okufanele ukwenze ukufaka umbhalo ongasindi kuwebhusayithi yakho, ofaka i-pixel (ifayela le-GIF) kuwo wonke amakhasi. Bese-ke, noma nini isivakashi silayisha ikhasi, i-Clearbit irekhoda ikheli lasesizindeni se-inthanethi futhi ilifanise nenkampani ukuze uqonde kangcono futhi uguqule impahla yakho eyigugu kakhulu - ithrafikhi yewebhusayithi yakho.
Zama Umbiko Wezivakashi Wamaviki Onke we-Clearbit MAHHALA
Ukwandisa Ukusebenza Kwewebhusayithi ye-B2B nge-Clearbit
Ukwenza Iwebhusayithi kube ngokwakho
Indawo enhle yokuqala ukuhlola ukwenza iwebhusayithi kube ngokwakho izihloko zakho, izibonelo zamakhasimende, nama-CTA. Ngokwesibonelo, I-DocSend, inkampani yesofthiwe yokwabelana ngamadokhumenti, yenze lokhu kubabukeli ababeqondise kubo - abaqalayo, onxiwankulu abangamabhizinisi, nezinkampani zamabhizinisi. Lapho izethameli ngasinye zifika kuwebhusayithi ye-DocSend, zathola owazo umlayezo weqhawe, isitatimende se-value prop, nesigaba sobufakazi bomphakathi esinamalogo enkampani afanelekile. Isigaba somuntu siqu sobufakazi bomphakathi silethe ukukhuphuka okungama-260% ekuthathweni komthofu kuphela.
Uma usuwenze ngezifiso amakhasi akho ewebhu futhi waqinisekisa izivakashi ukuthi zihlale zikhona, kusenendaba yokuguqula ithrafikhi ibe umkhondo. Amafomu anezinkambu eziningi kakhulu, ngokwesibonelo, angaba indawo yokunamathela, abangele abathengi ukuthi bakhononde futhi basheshe badlule kuwo - noma bakhiphe ibheyili ngokuphelele.
Lena inkinga ukuthi I-Livestormorm, inkundla yomhlangano wewebhu kanye nevidiyo, ibize i-Clearbit ukusiza ukuxazulula. Uma kuza efomini labo lokubhalisa esilingo samahhala, bebebona izinga lokuyeka elingu-60%. Lokho kwakusho ukuthi abavakashi besayithi abangaphansi kwesigamu abachofoze inkinobho ethi “Zama mahhala” empeleni baqedile ukubhalisa futhi bangena ku-radar yeqembu le-Livestorm.
Leli fomu lokubhalisa lalihloselwe ukusiza ukuhlonza abaholayo abathembisayo, kodwa bekunezinkambu eziningi okufanele zigcwaliswe (igama, isibongo, i-imeyili, isihloko somsebenzi, igama lenkampani, imboni, nosayizi wenkampani) futhi lehlise izinga labantu.
Ithimba belifuna ukufushanisa ifomu lokubhalisa ngaphandle kokulahlekelwa idatha engemuva ebalulekile. Nge-Clearbit, esebenzisa amakheli e-imeyili ukubheka imininingwane yebhizinisi lomkhokheli, iLivestorm isika izinkambu ezintathu efomini ngokuphelele (isihloko somsebenzi, imboni, nosayizi wenkampani) futhi yagcwalisa ngokuzenzakalela izinkambu ezintathu ezisele (igama, isibongo, kanye nenkampani. name) ngemuva nje kokuthi umholi ethayiphe ikheli labo le-imeyili lebhizinisi. Lokhu kushiye inkambu eyodwa nje yokungena mathupha efomini, kuthuthukiswe amazinga okuqeda ngo-40% kuya ku-50% futhi kwengeze imikhondo eyengeziwe engu-150 kuya ku-200 ngenyanga.
Ukwenza Ingxoxo kube ngokwakho
Ngaphandle kwamafomu, enye indlela yokuguqula ithrafikhi yewebhusayithi ibe imikhondo ingokuhlangenwe nakho okuthuthukisiwe kwebhokisi lengxoxo. Ingxoxo esendaweni ihlinzeka ngendlela enobungane yokuxhumana nezivakashi zewebhusayithi yakho futhi unikeze ulwazi oludingayo ngesikhathi sangempela.
Inkinga iwukuthi ngokuvamile awukwazi ukusho ukuthi ubani ongase abe nenani eliphezulu kakhulu phakathi kwabo bonke abantu abaqala ingxoxo yengxoxo. Kuwukumosha isikhathi nezinsiza - futhi ngokuvamile kubiza kakhulu - ukunikela inani elifanayo lamandla kubadobi abangahambisani nephrofayela yakho yekhasimende (ICP).
Kodwa kuthiwani uma ubunendlela yokugxilisa izinsiza zakho zengxoxo ebukhoma kuma-VIP akho? Bese ungabanikeza ukuzizwisa komuntu siqu kuyilapho ungavezi isici sengxoxo kubavakashi abangakabonakali njengabafaneleki kakhulu.
Lokhu kulula ukukwenza ngokuhlanganisa i-Clearbit namathuluzi engxoxo afana ne-Drift, Intercom, ne-Qualified ukuze umise izingxoxo eziqalayo ngokusekelwe kudatha ye-Clearbit. Ungathumela izivakashi ezifana nokuqukethwe kwakho okuhlobene kakhulu ne-ICP, njengemibuzo, i-ebook CTA, noma isicelo sedemo. Okungcono nakakhulu, ungabonisa ummeleli wangempela engxoxweni ukuze unikeze isevisi yomuntu siqu futhi ubonise isivakashi ukuthi ukhuluma nomuntu wangempela (esikhundleni se-bot). Ungakwazi futhi ukuhlela umlayezo wakho ukuze usebenzise igama lenkampani evakashele kanye nolunye ulwazi usebenzisa izifanekiso zethuluzi lakho lokuxoxa kanye nedatha ye-Clearbit.
Ukuhlinzeka abavakashi babo besizindalwazi ngolwazi olungcono kakhulu, inkundla yesizindalwazi I-MongoDB sebenzisa amathrekhi ezingxoxo ahlukene: amathemba aphansi, amaphuzu aphezulu, ukusekelwa kwamakhasimende, nalabo abathanda ukufunda ngomkhiqizo wabo wamahhala, umphakathi, noma iNyuvesi yaseMongoDB.
Ngokuhlukanisa ingxoxo yesegimenti ngayinye, i-MongoDB ibone izingxoxo ezingu-3x ngaphezulu nethimba labadayisi futhi yaphucula isikhathi sokubhuka kusukela ezinsukwini kuya kumasekhondi. Nakuba ifomu lokuxhumana elikuwebhusayithi ye-MongoDB ngokomlando beliwumshayeli oyinhloko wezingxoxo zokuthengisa, ingxoxo isivele yavela njengomthombo oyinhloko weziphakamisi zezandla.
Izaziso Zokuthengisa Zesikhathi Sangempela
Kodwa kwenzekani ngemuva kokuthi izivakashi zesayithi zigcwalise ifomu noma zixhumane nawe ngengxoxo? Ngisho nokubambezeleka okuncane kakhulu kwempendulo kungabiza imihlangano namadili amasha.
Ngaphambi kokusebenzisa i-Clearbit, radar, inkampani ehlinzeka ngezixazululo zezindawo ezilungele unjiniyela, ubumfihlo-kuqala, iphinde yahola lingakapheli ihora lokuhambisa ifomu - futhi lokho kubhekwe njengokuhle! Khona-ke, i-Radar yaqala ukusebenzisa i-Clearbit ukwazisa abaphindayo ngesikhathi i-akhawunti eqondiwe isesayithini yabo - lapho inzalo nenjongo yokuthenga iphakeme kakhulu - yehlisa isikhathi sabo sokusheshisa ukuya kumaminithi ambalwa ngemva kokuba i-akhawunti ishaya isayithi labo.
Ukuze benze kanjalo, banqume ukuthi yiziphi izivakashi ezizocupha izaziso, ngokusekelwe ekubukeni kwekhasi, i-Salesforce, nedatha ye-firmographic.
Bese, izexwayiso zesikhathi sangempela ku-Slack (noma kwamanye amafomethi afana ne-imeyili digests) zibonise ulwazi mayelana nenkampani, ukuthi bezikuliphi ikhasi, kanye nomlando wabo wokubuka wakamuva wamakhasi.
I-radar ize yamisa izexwayiso esiteshini somphakathi - ngenkathi ikhuluma nge-rep efanele ukuze ibazise - ukuze wonke umuntu enkampanini abone okwenzekayo, asabele, futhi abambe iqhaza. Phakathi kwama-emoji omkhosi, izexwayiso zinikeza iphoyinti elisha lokuhlanganyela lawo wonke umuntu - hhayi nje ummeli owabelwe - ukusiza ukuguqula lelo khasimende. Ngekhono lokubona i-akhawunti kusayithi labo nge-Clearbit, ukufinyelela ngesikhathi esifanele, bese ubhukha umhlangano, i-Radar ikhiqize u-$1 million ngaphezulu.
Funda kabanzi mayelana ne-Clearbit
Tags: b2bb2b okuqukethwe okuguquguqukayob2b ukuguqulwa kokuholab2b marketing intelligenceusayizi webhizinisibaxoxeisipiliyoni sokuxoxaukwenza ngokwezifiso ingxoxoi-clearbitimboni yenkampaniindawo yenkampaniIgama Lenkampaniguqula okuningiidatha yabantui-docsendokuqukethwe okunamandlaiqhawe elinamandlai-ebookukuhlanganiswa kwe-imeyiliifemuifemuukuthwebula ifomuip intelligenceukuguqulwa okuholayoI-LivestormormindawoI-MongoDBukubuka ikhasii-pixel gifImibuzoizexwayiso zesikhathi sangempelaUkwenza ngezifiso kwesikhathi sangempelaveza ubuhlakanireverse ip lookuphlehlisa ip-intelligencehlehla-ipizexwayiso zokuthengisaipayipi lokuthengisasalesforceamathuba okuthengisaithuba lokuthengisafinyeza amafomuifomu lokubhalisaisexwayiso esixegayoukuhlanganiswa okubuthakathakaubuchwepheshe obusetshenzisiweqalisaqalisa isazisouhlobo lwebhizinisiukwenza kube ngokwakho iwebhusayithiumbiko wesivakashi wamasonto onke
Amabhrendi Alangazelela Ukuthembisana Kufanele Enze Lezi Zinto Ezintathu